Madaxweynaha dalka oo loogu baaqay inuu heshiisiiyo KNUT iyo TSC | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo loogu baaqay inuu heshiisiiyo KNUT iyo TSC
Madaxweynaha dalka oo loogu baaqay inuu heshiisiiyo KNUT iyo TSC
Labo hay’adood oo caalami ah ayaa madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta u qoray warqad ay kaga codsanayaan inuu soo farogeliyo muranka in muddo ah ka dhex jiray ururka qaran ee macallimiinta dalka ee KNUT iyo guddiga adeegga barayaasha ee TSC.
Hay’adahan ayaa kala ah Education International iyo ITUC waxayna Mr. Kenyatta ku boorriyeen inuu dadaal ku bixiyo sidii TSC looga hor istaagi lahaa inay meesha ka saarto xubinimada macallimiinta ka tirsan ururka KNUT.
Qoraalka ay hay’adahan si wadajir ah u soo saareen ayaa lagu xusay in guddiga TSC laga doonayo inuu soo afjaro cadaadiska uu ku hayo dalladda qaran ee macallimiinta oo uu wada-hadal la yeesho mas’uuliyiinta ururkan.
TSC ayaa sidoo kale loo soo jeediyay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii gorgortanka ku saleysnaa ee la saxiixday sanadkii 2017-kii.
Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan xoghayaha guud ee ururka macallimiinta ee KNUT ahna xildhibaan baarlamaanka si magacaabid ah ku galay Mr. Wilson Sossion uu wacad ku maray inay ku dhaqaqayaan shaqo joojin qaran hadii TSC aynan ka tanaasulin carqaladeynta howlaha ururkan.
Guddiga adeegga macallimiinta ee TSC ayaa horay iskaga fogeeyay eedeymaha uga yimid Sossion iyo mas’uuliyiinta kale.
Next articleKenya oo madaxda Suudaanta Koonfureed baaq u dirtay